Ngaba ufuna ukuziva into entsha, inomdla kwaye ingavamile? Zama izikhundla owaziyo, kodwa ngendlela eyahlukileyo!
"Umthunywa Wevangeli", kodwa ulala ngecala elinye
Uxoke ngokukhawuleza emhlane wakho, udonsa amadolo akho esifubeni, ubeke iinyawo zakho kunye. Intanda yakho, maguqe kwaye angene kuwe. Ngexesha elifanayo, kufuneka lifakwe kwizandla zakho, ukuze kube lula kuwe. Emva koko ujikeleze ngokukhawuleza, phantse ulele kwicala lakho. Uluhlu luqinisekisa ubungqina obuninzi. Xa ujika, funda isikhundla apho uvakalelwa kukuba umthandayo uthinta ipeni kwiindawo ezibuhlungu kwizondo. Ngoko uya kufezekisa i-orgasm eqinileyo. Myeke umthandi wakho abe mnqabile - mxelele ngaye.
Ukuhlala, kodwa ekumanyeni okuqinileyo kweqabane
Hlalani ngokulula ngokubhekiselelana nomnye kumgangatho ophephe okanye kwindawo yokulala. Yamkela imilenze yomntu, udibanise kancinci ukusuka kuye ngasentla. Mcele ukuba angaboni, kodwa ukugoba imilenze. Maye baphakamise ngamadolo awo ncinane. Ngoko ukungena kuya kufumana ubunzulu obumnandi ngakumbi. Faka izandla zakho emahlombe akhe. Vumela iqabane lakho lixhase iesile, likuncede uhambe.
Rider, kodwa squat
Vumela iqabane lilale emhlane wakhe kwaye linyanzise imilenze yakhe, kwaye uhlala phantsi kwe-squat. Ukuze ungalokothi ulahlekelwe ukulinganisela kulo mzekelo, unokubamba umntu ngokuthandana kwiinqumlo zakho okanye ubeke izandla zakho kwiintambo zakhe. Emva koko pha kamisa kwaye unciphise i-pelvis, uvumele ilungu lingene kuwe kwaye liphume. Ngeentlobo ezahlukeneyo, unako ukuphakama imizuzwana embalwa ukuphakama kunokwenzeka, ukwenzela ukuba ube nekhanda lentloko. Gcina kule ndawo, ngokukhawuleza ukucima imisipha yamanzi. Bese ukhulule kwaye uqhubeke uthanda uthando ngendlela eqhelekileyo.
Dlala umdlalo wentombazana. Isiqalo sinokusebenza njengenguqu yeklasi ye-"umgibeli". Uhlala ehleli emhlane wakhe, kwaye uhlala kwiqabane elivela phezulu, ukubethelela umsizi wakhe ngemilenze, uguqa ngamadolo akhe kwicala le-whiner yomlingane. Emva koko pha kamisa, ubeke iinyawo embhedeni uze uphendule kumlingane wakho. Umthandayo unokuthinta iinqumlo zakho, ubambe ngobumnene umqolo wakho nentamo.
Ukulala ngesisu sam, kodwa ngokulenga kancane kumbhede
Uxoka ngokukhawuleza kwisisu sakho, kodwa intloko kunye namagxa akho zixhomekeke kumda wombhede. Unokuphumla izandla zakho phantsi. Imisundu isasazeka, yiphakamise kancane imbongolo. Uthandwa, makalele phakathi kwemilenze yakho kwaye uphakamise isifuba sakho senadasha yakho.
Ngasecaleni, kodwa amadolo ngexesha elinye liqiniswe kwisifuba
Ukulala ngecala lakho, udlulisele ubunzima bomzimba emlonyeni nasemagxeni. Intloko ngesandla sakho. Umlenze ulele embhedeni udinga ukulungiswa, kwaye indoda yakho iya kuwela kuyo. Omnye umlenze ugoba emadolweni aze athabathe esifubeni, othandekayo, makabeke isandla sakhe phantsi kwayo aze aphakanyise unyawo lwakhe, ukuze kube lula ukuba angene kuwe ngokungakumbi.
Kule ndawo, iqabane likhululekile ukuchukumisa isifuba sakho. Mcele ukuba akukhathaze, wenze i-massage eerotic.
Emva koko, kodwa ukunyakaza kwakhe
Kubalulekile ukuguqa nokuxhomekeka entendeni ukuze ube kuzo zonke ezine. Intanda, mqubude emva kwakho. Ukudibanisa imilenze kunye nesilayidi phakathi kwemilenze yomlingane. Unamathele ngokukhawuleza emva kwendawo ephihliweyo, kwaye umzimba ulungele phambili. Iqabane lingakuncedisa nge-hip efanelekileyo. Esi sikhundla sinomdla kakhulu - kuwe, nakumntu wakho. Xa iqabane lomlingani lihamba ngaphakathi kwakho, gweba ngokukhawuleza iinwele ezisekhohlo, uze uye ngasekunene. Oku kuya kuphucula ukuvakalelwa kwakho.
Unokuxhomekeka kwi-forearm kwaye ucinezele entendeni ye-clitoris. Ngako oko, uya kuzibonelela ngokuzonwabisa. Kwaye unokucela umthandi wakho ukuba achukumise i-clitoris yakho nelabia.
Ngokwenene sikhetha njani amaqabane esondo?
Ama-Asexuals: ubomi obungenasondo
I-libido yesifazana kunye nokubanda kwamabhinqa
Ukuqeqeshwa komntwana kwibhola
Ubomi bomama ongatshatanga
Iibhatatesibini ezibhaka kabini
Iintsana zihlala zihlala
Unokunyamekela njani izandla zakho ekhaya?
Sihlakulela ingcamango kunye nokucinga komntwana: indlela ekhohlakeleyo ye-2018